Inona no atao hoe Gravimetric Analysis amin'ny Chemistry?
Ny fanadihadiana Gravimetric dia fitambarana karazana fandalinana laboratika marobe izay mifototra amin'ny famaritana ny volan'ny mpikaroka.
Ohatra iray amin'ny teknikan'ny fanadihadiana momba ny gravimetrika dia azo ampiasaina mba hamaritana ny habetsan'ny ion ao anatin'ny vahaolana amin'ny famongorana ny habetsan'ny voambolana iray misy ny ion ao anaty solvent mba hanasarahana ny ion avy ao aminy. Ny ionona avy eo dia nalaina na nesorina avy amin'ny vahaolana ary navesa-danja.
Ity endrika fandalinana momba ny gravimetrika ity dia antsoina hoe gravimetry .
Ny endrika fanadihadiana momba ny gravimetrika hafa dia ny fahavitrihan'ny gravimetry . Ao anatin'io fomba fiasa io, ny vovoka ao anaty fitambarana dia misaraka amin'ny fanasitranana azy ireo amin'ny famongorana ireo simika. Ny vovoka volatile dia vaporisina ary very (na voaangona), izay miteraka fihenana mismisy amin'ny habetsaky ny santionany mivaingana.
Fandaharam-potoana Gravimetric Analysis
Mba hahazoana tombony amin'ny fanadihadiana momba ny gravimétrique dia tsy maintsy misy ny fepetra sasany:
Ny lanjan'ny fahalianana dia tsy maintsy manala tanteraka ny vahaolana.
Ny fofona dia tsy maintsy misy firaisana madio.
Tsy maintsy azo atao ny manasitrana ny fivoahana.
Mazava ho azy, misy hadisoana amin'ny fandalinana toy izany! Angamba tsy ny elanelana rehetra hikorontana. Angamba mety ho fanangonana izy ireo mandritra ny filtration. Ny sasany dia mety ho very mandritra ny fizotran'ny filtration, na dia mandeha amin'ny sivana izy na tsia dia tsy tafarina avy amin'ny fitaovana fanoratana.
Ohatra, ny volafotsy, ny taratra, na ny mercur dia azo ampiasaina mba hamaritana ny chlor satria ireo metaly ireo ho an'ny ranoka tsy misy fotolidera. Ny sodium kosa etsy ankilany dia mamorona ranon-damosina izay mamitsaka ao anaty rano fa tsy mipoitra.
Dingana amin'ny Analysis Gravimetric
Ilaina mialoha ny fandrefesana izany.
Zava-dehibe ny mandroaka rano izay mety hahasarika azy.
Ampio tsy fantatra ao anaty tavoahangy iray misy tsiranoka ny varavarany. Ario ny tavoahangy sy ny santionany ao anaty lafaoro mba hanesorana rano. Afangaroy ny ohatra ao amin'ny hain-trano.
Miantefa indraindray ny habetsaky ny tsy fantatra ao anaty baoritra.
Atsaharo ny tsy fantatra mba hamoronana vahaolana.
Ampio solontenan'ny vahaolana amin'ny vahaolana. Azonao atao ny manasitrana ny vahaolana, satria mampitombo ny isam-bolana ny fiterahana, mampihena ny fatiantoka mandritra ny filtration. Ny fanasitranana ilay vahaolana dia antsoina hoe digestion.
Ampiasao ny fanamafisana ny vaksiny mba hanivanana ny vahaolana.
Mivadi-maso sy mandanjalanja ny fisintonana voaangona.
Ampiasao ny stoichiometry mifototra amin'ny fitovizan'ny simika voalanjalanja mba hahitana ny habetsaky ny liana liana. Mamaritra ny isan-jato isan-jaton'ny fanadihadiana amin'ny fizarana ny habetsaky ny fandalinana amin'ny ampahany tsy fantatra.
Ohatra, amin'ny fampiasana volafotsy mba hitadiavana chlorida tsy fantatra, ny kajy dia mety:
Lamba maina tsy fantatra: 0,0984
Ny habetsahan'ny AgCl: 0.2290
Hatramin'ny molekelin'ny AgCl dia misy mololo iray misy cl :
(1,598 x 10 -3 ) x (35.453 g / mol Cl) = 0,0566 g Cl (0.566 g Cl) / (0.0984 g santimetatra) x 100% = 57,57%
Ny fitarihan'ny tarika dia mety safidy hafa ho an'ny fanadihadiana.
Na izany aza, raha ampiasaina ny tari-dalana, ny kajika dia mila ampamoaka fa ny mololo iray misy PbCl 2 dia misy chlorida roa. Mariho ihany koa, ny hadisoana dia nitombo kokoa tamin'ny fampiasana ny lead satria ny taratra dia tsy voavaha tanteraka. Mety ho vitsy kely ny klôrida no mijanona eo amin'ny vahaolana fa tsy marefo.
Fanodinkodinana fepetra sy ohatra
Fiaraha-miasa amin'ny Cannizzaro
Ionic Radius Famaritana sy Trends
Thiol Group Definitions
Famaritana ny fenitra (Chemistry sy Physics)
Roasting Definition (Science)
Famaritana sy ny ohatra asaina (Physics and Chemistry)
Inona no tetikasa tain-kovitra?
Famaritana tsy an-tetikady amin'ny Chemistry
Epigrama, Epigraph ary Epitaph
El Capitan: Ny Cliff Cliff indrindra any Yosemite Valley
Manidina, gripa ary fandroana
Historique Profil de France
Ethnoarchaeology - Fanovozana ny Anthropologie sy ny arkeolojia
Ny Fandrosoana Mandritra ny Pigs: Ny Tantaram-piainan'i Sus Scrofa
Famoahana ny tantaram-pianakaviana sy printy amin'ny serivisy tolotra
Teny nalaina tao amin'ny "Heart of Darkness" nataon'i Joseph Conrad
Ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Tampony tamin'ny 1957: Roth v. Etazonia
Inona no Tia Fitiavana An'Andriamanitra?
Ny Printsy sy ny Frog (2009) - Sary Gallery of Characters
Diplomatie sy ny fomba ambaran'i Amerika
Ny JSON Gem
Merion's Wicker Korkets
Hira Fiderana maro samihafa - miaraka amin'ny dénominateur mahazatra
Inona no Fipetrahan'ny Fitsarana an'i Kristy?
Inona no dikan'ny hoe holatra amin'ny National Augusta?
Tortoise sy Turtle Magic ary Folklore
Ahoana no ahafahanao mivezivezy amin'ny arabe sy ny fandaharam-potoana?
Torolalana ho an'ny Nasca
VALDEZ Faminaniana sy Tantaram-pianakaviana
Famaritana ny fe-potoam-piasan'ny lalàna amin'ny chemi